Iindaba - Zeziphi izibonelelo zokusebenzisa izinto ezahlukeneyo ngomatshini omkhulu
Zeziphi izibonelelo zokusebenzisa izinto ezahlukeneyo kwimishini enkulu
Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zobuchwephesha kubathengi bayo ngexesha lokusebenza koomatshini abasebenza ngobukhulu, indawo yokusebenza kufuneka ibekwe ngokufanelekileyo kwindawo esisigxina kwisixhobo somatshini ngexesha lokusetyenziswa. Ukuthintela umsebenzo ngexesha lenkqubo machining. Xa ukufuduswa kuchatshazelwa yimikhosi yangaphandle enjengokusika amandla kunye nomxhuzulane, kufuneka kusetyenziswe uqinisa oluthile ekubambeni indawo yokusebenza ukuze kugcinwe imeko yayo ingatshintshi. Zeziphi izibonelelo zokusebenzisa izinto ezahlukeneyo ukwenza umatshini omkhulu?
Izibonelelo zokusebenzisa i-Q235A (i-A3 yentsimbi) yokwenza umatshini omkhulu
Olona ncedo luphambili lwemisebenzi yokuchaka enkulu kukuba ineplastikhi ephezulu, ukuqina kunye nokusebenza kwe-welding kwinqanaba elithile. Imveliso yonke inesitampu esithile sokusebenza kunye nokusebenza okubandayo kokugoba. Isetyenziselwa ikakhulu iimfuno xa zisetyenziswa. Kwinqanaba eliphantsi lomatshini kunye neentsimbi ezakhiweyo, ezinjengeentambo zokubopha, iintonga zokudibanisa, izikhonkwane, izikhonkwane, izikrufu, amandongomane, izibiyeli, iziseko, njl.
Izinto eziluncedo zokusebenzisa i-40Cr yokwenza umatshini omkhulu
Ukuchaneka okukhulu kuya kuba neepropathi zoomatshini ezihle kakhulu, ubungqongqo beqondo lobushushu obuphantsi, ubuntununtunu obuphantsi bokuqina kunye nokuqina okuhle kwinqanaba elithile emva kokucima kunye nokubila. Amandla aphakamileyo anokufumaneka xa i-cooled cooled, kwaye iinxalenye zithambekele ekuqhekekeni xa zipholile ngamanzi. Emva kokudinwa okanye ukucima kunye nokushisa, i-machinability ilungile, kodwa i-weldability ayilungile kwaye ukuqhekeka kulula ukwenzeka.
Xa umatshini usetyenziswa, ubukhulu becala usetyenziselwa iindawo ezihamba ngesantya esiphezulu kwinkqubo yokuvelisa emva kokucima kunye nokubila, ezinje ngezixhobo zomatshini, izixhobo, iintshulube, njl.njl. Isetyenziselwa ukwenza iinxalenye ngobulukhuni obuphezulu kwaye inxibe ukumelana, ezinje ngegiya, imingxunya, ii-spindles, i-crankshafts, i-spindles, imikhono, izikhonkwane, iintonga zokudibanisa, njl.
Emva kokucima kunye nokushisa kubushushu obuphakathi, isetyenziselwa ukwenza umsebenzi onzima, isantya esiphakathi esihambisa izinto zoomatshini, ezinjengeempompo zeoyile ezijikelezayo, izilayida, amagiya, izinto zokuluka, njl.njl. yenza umsebenzi onzima, iimpembelelo eziphantsi, iinxalenye zoomatshini ezinxiba ezinganyangekiyo, ezinje ngeentshulube, iintonga zokuphotha, kunye neshafti. Kwisiza se-carbonitriding, iindawo zothumelo ezinobukhulu obukhulu kunye nobunzima obuphezulu beqondo lobushushu obuphantsi, njengeeshafti, iigesi, njl.
Uncedo lokusebenzisa i-45 # yokwenza umatshini omkhulu
I-45 # sisinyithi esakhiwe ngobunjani obuphezulu, kwaye ngoku sesona sinyibilikisi sisicoci kunye nesinyithi esishushu.
Kwinkqubo yokusebenza, iya kuba neepropathi ezintle kakhulu zoomatshini. Inobunzima obuphantsi ngexesha lokusetyenziswa kwaye ithambekele ekuqhekekeni ngexesha lokucinywa kwamanzi. Amalungu welding kufuneka preheated phambi iwelding kwaye annealed emva welding.
Isetyenziselwa ikakhulu ukuvelisa amandla oomatshini ahamba ngamandla aphezulu, afana nee-impellers, iipiston, i-shafts, iigears, iiracks, iintshulube, njl.
Ixesha Post: Sep-25-2020